Njani bale mihla abaqondisi-mthetho iyakwenza Ngakumbi njengoko Abacebisi — HuffPost
Isemthethweni iinkonzo aren khange njengoko sika kwaye dried njengoko baya kusetyenziswa ukuba abe. Eneneni, abaqondisi-mthetho ingaba kujike ethabatha a ezintshana i-engile ngenxa yabo career: indawo consultancy. Ngamanye amaxesha, oku kuthetha encinane-ifemi lwahlulelwano phakathi attorneys kunye efanayo isiqalo ngamanye amaxesha, baye bazibandakanya enkulu amakhulu ukuze ube dozens okanye nkqu amakhulu abaqondisi-mthetho zokusebenza emva scenes. Nangeyiphina indlela, xa abantu abaninzi bafuna isemthethweni iinkonzo, la ngamazwi organizations baya ngokuqhelekileyo cinga kuqala ngoba apho abaqondisi-mthetho ezininzi imibuzo gravitate. Kodwa ngaphezu experienced abaqondisi-mthetho ingaba iqala ukuba veer ukususela kweli ucwangciso abaxhasayo a ngakumbi elizimeleyo kokubonisana indlela. I indawo isemthethweni consultant kubaluleke kakhulu kodwa flexible Ezinye
Japan Kwi-Ndlu Abaqondisi-Mthetho Association
Japan Kwi-Ndlu abaqondisi-mthetho Association (JILA) yi kungokuzithandela umbutho ukuba waba waseka kwi-agasti, yi-practicing kwaye yangaphambili kwi-ndlu abaqondisi-mthetho Rhoqo Amalungu (practicing kwi-ndlu abaqondisi-mthetho): — Associate Amalungu (amalungu kunye edlulileyo amava njengoko kwi-ndlu abaqondisi-mthetho): — Non-ebhalisiweyo Amalungu (amalungu abakhoyo hayi okwangoku ebhalisiweyo njengoko abaqondisi-mthetho): Oku stylish blue uphawu ukuba Association isebenzisa kwi yayo ishishini amakhadi kwaye isihloko seleta wenziwa designer Kazuto Ishida(Kazuto Ishida design Studio) darkish blue limele umfanekiso labantu abathembekileyo, composed kwaye kulungile-umbutho abaqondisi-mthetho, kwaye uphawu amalungiselelo resembles a umqolo zesixeko, yenziwe kwi-ondilisekileyo umfanekiso Parthenon I-Association ngu owenza imisebenzi ezifana nolawulo amalungu, kunye intsebenziswano ye-Association for Ukuxhasa Nenkululeko Societies (ivula kwi-kwenye
Oko kuxhomekeke iimfuno inkampani yakho Arbitration unikezela ingxelo enye Arbitration inikezela iinkampani a private, indlela settle contractual disputes, ngoko ke, ukuba ishishini unako ukuzithwala kwi njengesiqhelo kwaye onke amaqela unako ukufumana enobulungisa sikazwelonke. Ukuba ufaka drafting isivumelwano, ibe okulungileyo ukuxoxa kuquka i-arbitration lokulingana kuba imbambano ubungakanani kunye yakho isivumelwano lawyer. Kwaye ukuba ufuna kokuqwalasela arbitration emva imbambano sele arisen, i-arbitration lawyer ukususela Priori womnatha unako ukunceda wena settle ekhoyo kunjalo nge-arbitration kunye eyona sikazwelonke kunokwenzeka. Arbitration ngumzekelo enye imbambano isisombululo umgaqo-nkqubo amaqela unako ukukhetha endaweni kokuya enkundleni. Arbitration kufuneka consensually esikhethiweyo ngumthetho kunye amaqela idla kwi-yoqobo isivumelwano phakathi amaqela amabini.
Nagahama, Mizuno Inoue ifumaneka Tokyo, Ejapan kwaye inika iinkonzo non-Isijapanese abantu kwaye amakhulu ngokunjalo Isijapanese abantu kwaye amakhulu. Senzo kwiindawo ziquka corporate umthetho, mergers kwaye acquisitions, nephepha kwaye i-arhente zamazwe ngamazwe. Umthetho Ifemi ke Isixhosa sisebenzisa a boutique uhlobo umthetho ifemi lwesiqulatho apho kugxilwa kwi corporate kwaye real estate imiba. Uzakufumana kuthi eluncedo xa ufuna zibandakanya kwishishini lakho kwi-Japan, irejista i-sebe, kwaye bagcine inkampani elungileyo ukuze ukuthobela Iinkampani Act ka-Japan. Sikwangawo ingcaphephe ka-real estate ubhaliso. Ukwakha ukusuka yayo kweelwimi-ifumana imali kwaye securitization iindlela ezilungileyo, Atsumi Sakai siqulunqe ubunzulu iinkalo zobuchule ukuba ivakalisa kuwo yonke imihlaba ishishini kwaye iimali umthetho. Ifemi
Njani ibango kwi kunokwenzeka ingozi Ezindleleni-Mali ngaphandle a lawyer kwi-ezintathu amanyathelo
Victims of road neengozi zithe bayakhuthazwa ukuba bypass iinkonzo ka-abaqondisi-mthetho ukuba bafake amabango ngokuchasene kunokwenzeka ingozi Ezindleleni-Mali (RAF). Amapolisa ingxelo kwaye okanye ityala inani kunokwenzeka ingozi. Zonke yakho afanelekileyo personal iinkcukacha ngokunjalo abo nawuphi na umntu obandakanyekayo kwi-kunokwenzeka ingozi. Zonke zonyango amaxwebhu ukuxhasa ibango ka-nokonzakala kwabo ezithe. Nayiphi na motivating ubungqina ukusuka ukhathalelo kunye okanye isemthethweni ingcaphephe ngokunjalo ingqina ubungqina. Naluphi na ulwazi oluyimfuneko eziphathelele kunokwenzeka ingozi ezifana umonakalo othe ukuba isithuthi s kwaye okanye engqonge zesixeko. Amabango kufuneka kufakwa kwi ibango ifom (ifom) enika ulwazi olusisiseko kwi claimant, izithuthi kwaye amaqela abandakanyeka collision, umhla kwaye endaweni kunokwenzeka ingozi kwaye
Nagahama, Mizuno Inoue ifumaneka Tokyo, Ejapan kwaye ibonelela iinkonzo non-Isijapanese abantu kwaye amakhulu ngokunjalo Isijapanese abantu kwaye amakhulu. Senzo kwiindawo ziquka corporate umthetho, mergers kwaye acquisitions, nephepha kwaye i-arhente zamazwe ngamazwe. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Baker McKenzie (Gaikokuho Edibeneyo Yeshishini) sele ezinikezelwe exceptional isemthethweni ngeenkonzo kubathengi bethu zokusebenza kwi-Japan kwaye internationally kuba ezine decades, kwaye enye oldest, ukususela ivula yayo doors njengoko i-enxulumene-ofisi Baker McKenzie ngowe. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ngu inkokeli phakathi wamazwe ngamazwe firms, ngokubonelela ishishini umthetho ingcebiso ephezulu umgangatho kulo lonke Yurophu, Kumbindi Mpuma, e-Asia kunye NATHI. Kunye phezu, amakhulu amahlanu abaqondisi-mthetho kwamashumi
Baker McKenzie (Gaikokuho Edibeneyo Yeshishini) sele ezinikezelwe exceptional isemthethweni ngeenkonzo kubathengi bethu zokusebenza kwi-Japan kwaye internationally kuba ezine decades, kwaye enye oldest, ukususela ivula yayo doors njengoko i-enxulumene-ofisi Baker McKenzie ngowe. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Herbert Smith Freehills sesinye ihlabathi ke ezikhokelela elinolwazi iinkonzo amashishini, ukuzisa kunye eyona abantu kuwo zethu amabini anesithandathu ii-ofisi, bahlangana bonke yakho isemthethweni iinkonzo neemfuno ngqukuva. Sinako ukunceda ukuba baqonde amathuba xa yokulawula umngcipheko Waseka kwi-Japan ngowe, Sonderhoff Einsel ifemi sele mahlanu kuba ngaphezu eminyaka kwi-Japan njengoko ephambili ifemi kunye nokomelela European ties. Ekubeni traditionally uhleli phakathi kuqala kuba isijamani corporate abaxhasi ezama isemthethweni inkxaso
Nathi Federal Iinkundla abaqondisi-mthetho, Umthetho Firms kwi-Japan kuba Wonke Isixeko
E-Kilpatrick Townsend Stockton LLP, bethu attorneys ingaba ngokupheleleyo owenza impumelelo ifemi ke abathengi Abaqondisi-mthetho kulo Morrison Foerster ufumana i-global ifemi kunye phezu, abaqondisi-mthetho kunye elinesithandathu ofisi jikelele ehlabathini. Zethu attorneys share imigangatho ephezulu, ukuzinikela ukugqwesha, passion kuba ekuncedeni zabo abaxhasi waphumelela. Zethu Corporate Senzo limele ezinye ezininzi anako konke iinkampani ehlabathini Ngokubhekiselele kwi-Osaka, Ejapan waza waseka ngowe, bethu ifemi sele waqhubeka ukubonelela zethu abaxhasi kunye umgangatho isemthethweni iinkonzo kwi-i-iyanelisa kwaye iindleko esebenzayo nefanelekileyo. Sino otyebileyo amava kwi-uphatho a libanzi ngezixhobo ezahlukeneyo ngamazwe kunye nelindle Isijapanese imicimbi enxulumene kwaye sijonge phambili ngokusebenzisa oko
Real Estate Minato-ku, Tokyo, Ejapan
Iqala ngojulayi th, uza kukwazi ukuhlaziya yakho visa-intanethi, endaweni ekubeni ukuba slog ukuba Immigration Bureau. Nantsi indlela entsha visa zokuhlaziya indlela kusebenza kwaye ngubani eligible. Iqala ngojulayi th, foreigners abahlala e-Japan uza kukwazi yandisa zabo xesha-hlala-intanethi, kunokuba ekubeni ukuya Immigration Bureau ukuba ufake isicelo kwi-umntu. Yintoni ke ukuthelekisa yokuthenga ixabiso kuba omtsha apartment kwi-Tokyo kwi. Avareji ubungakanani Kwaye njani omkhulu waba i-avareji mortgage abantu bathabatha ngaphandle ukuthenga zabo ekhaya. Iimpendulo le mibuzo nezinye izinto ukwazi malunga Tokyo ekhaya buyers. Ngoko phakathi buyers ezintsha apartments kwi-ngakumbi Tokyo, kuquka i-avareji yokuthenga ixabiso, apartment ubungakanani, indlu ingeniso, kwaye izizathu ukuthenga
Njani ukuziphatha izindlu imali-mboleko deduction kwi-Japan — irhafu, umthetho Real estate kwi-Japan
Kwimeko apho ukuba ukhe wakha lemveliso entsha indlu okanye ukuthengwa okwesibini isandla real estate kuba yokuhlala, kuxhomekeke imeko, ungafaka isicelo irhafu credit. Ukuze isicelo eli izindlu imali-mboleko deduction, kufuneka ifayile irhafu kubuyela yi-ngokwakho. （ Nkqu ukuba ufaka salaried lwabasebenzi basefama, ufuna ukuyenza. Ukuba ungenza isicelo eli deduction, uyakwazi inciphise isixa-mali irhafu e ubukhulu, oxygen ngamnye ngonyaka. Kwaye uyakwazi inciphise isixa-mali irhafu e ubukhulu nge sine ezingama-oxygen kuba iminyaka elishumi, oxygen × iminyaka elishumi ezine zeerandi oxygen. Nangona kunjalo, kwimeko kufuneka ukuthengwa yakho real estate ngaphandle ukubhatala lwamanzi irhafu isibhozo, isixa-mali ngasentla ufumana isibini ezingama-oxygen kwaye, oxygen. Kwimeko kufuneka ukuthengwa yakho
Credit kwaye Mortgage abaqondisi-mthetho, Umthetho Firms kwi-Japan kuba Wonke Isixeko
Baker McKenzie (Gaikokuho Edibeneyo Yeshishini) sele ezinikezelwe exceptional isemthethweni ngeenkonzo kubathengi bethu zokusebenza kwi — Japan kwaye internationally kuba ezine decades, kwaye enye oldest, ukususela ivula yayo doors njengoko i-enxulumene-ofisi Baker McKenzie ngowe. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Davis Polk sesinye ihlabathi ke, inkulumbuso umthetho firms. Ezaziwayo kuba zethu skillful umsebenzi highly complex imicimbi asele kakhulu kubathengi bethu, siya kunikela amanqanaba aphezulu ukugqwesha kwaye breadth kuwo onke zethu iindlela ezilungileyo kwaye specialties. Wethu, abaxhasi, abaninzi kubo ishishini kwaye yehlabathi iinkokeli. Umthetho Ifemi ke Isixhosa K L Amasango LLP limele ezikhokelela yehlabathi amakhulu, ukukhula koqoqosho eliphakathi-kwimakethi iinkampani, ikomkhulu kwiimarike abathabatha inxaxheba entrepreneurs
Consumer abaqondisi-mthetho, Umthetho Firms kwi-Japan kuba Wonke Isixeko
Consumer amalungelo consumer protection umthetho inika indlela kuba abantu ekulweni emva ngokuchasene abusive ishishini iindlela ezilungileyo. Le mithetho ingaba yenzelwe ukubamba abathengisi bathenga ngamalungelo kwempahla neenkonzo iphendula xa bazama inzuzo xa uthatha ithuba i-consumer ke nokungabikho ulwazi okanye bargaining amandla. Abanye ukuziphatha kuhlangatyezwana yi-consumer amalungelo imithetho ngu ngokulula akulunganga, ngeli lixa ezinye ukuziphatha kusenokuba njengoko kuchaziwe outright ubuqhetseba. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ngu inkokeli phakathi wamazwe ngamazwe firms, ngokubonelela ishishini umthetho ingcebiso ephezulu umgangatho kulo lonke Yurophu, Kumbindi Mpuma, e-Asia kunye NATHI. Kunye phezu, amakhulu amahlanu abaqondisi-mthetho kwamashumi amabini anesixhenxe iqhosha ishishini centers jikelele ehlabathini, sinike elizeleyo. Umthetho Ifemi ke
Lawyer Umbuzo — Iindleko Ukuzoba phezulu Elifutshane Zengqesho
Nabani na olilungu a Lawyer Kuba Seriously Wabuza a Lawyer ukuzoba phezulu omfutshane isivumelwano Kangakanani yindlela elungileyo respectable isixa-mali imali ukuhlawula a lawyer tip elungileyo usapho umhlobo (Lawyer) kuba abanye elifutshane ishishini yerente namaphepha angama-ngokulinganayo! phezulu umzekelo. Nto entle, kodwa ngokuqinisekileyo? kuthatha abanye ixesha ntoni, yintoni ebeya kuba satisfactory Tip Intlawulo kuba into, ngolohlobo. Eks. Renting ipropati ushishino lwe X isixa-mali Dollazi ngenyanga, kunye anesihlanu unyaka isivumelwano kunye oluneenkcukacha impahla yexabiso kwi-sebenzisa ekunokukhethwa kuko ukwandisa kuthenga ekupheleni terem ye-ukuqeshisa (Awkwardly ubeke, lol) usapho umfundi abe insulted e yakho nkqu umnikelo ukuba ahlawule nantoni na kuba i-occasional isandla kunye elula isemthethweni
Japan — GATCA kwaye CRS ukuthotyelwa kwemithetho (OECD) — Ngamazwe Irhafu abaqondisi-mthetho
I-United States ayiyi kuphela kweli lizwe anomdla umleqa langaphandle irhafu kuphunyezwe involving overseas bank ii-akhawunti, ii-akhawunti zemali, kwaye enye ingeniso ijikelezisa impahla yexabiso. Nangona FATCA (Iinqwelo-Akhawunti Irhafu Kuphunyezwe Act) yi-USA Umthetho, kwaye i-United States uye wangena FATCA izivumelwano kunye eziliqela ezahlukeneyo amazwe, kukho omnye umthetho kwi ulundiname ngokuba CRS GATCA. CRS yindlela Eqhelekileyo lokwenza ingxelo Umgangatho kwaye sibonwa»Inguqulelo Yehlabathi»FATCA, yenzelwe ukuba ezinye mnyama phantsi kwi offshore tax evasion kwaye non-lokwenza ingxelo-mali ii-akhawunti. I-Isijapanese Urhulumente ubeke khona ukuze ube sele wonke injongo ka-ukuthobela i-OECD Esezantsi kuba Oluzenzekelayo Exchange-Mali nee-Akhawunti kwesicwangciso CRS GATCA kwaye ndiya begin lokwenza ingxelo ebutsheni ngowama. Ngaphezu koko,
Irhafu abaqondisi-mthetho, Umthetho Firms kwi-Japan kuba Wonke Isixeko
Baker McKenzie (Gaikokuho Edibeneyo Yeshishini) sele ezinikezelwe exceptional isemthethweni ngeenkonzo kubathengi bethu zokusebenza kwi-Japan kwaye internationally kuba ezine decades, kwaye enye oldest, ukususela ivula yayo doors njengoko i-enxulumene-ofisi Baker McKenzie ngowe. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ngu inkokeli phakathi wamazwe ngamazwe firms, ngokubonelela ishishini umthetho ingcebiso ephezulu umgangatho kulo lonke Yurophu, Kumbindi Mpuma, e-Asia kunye NATHI. Kunye phezu, amakhulu amahlanu abaqondisi-mthetho kwamashumi amabini anesixhenxe iqhosha ishishini centers jikelele ehlabathini, sinike elizeleyo. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Ashurst yindlela ephambili wamazwe ngamazwe ifemi advising corporates, — mali amaziko kunye noorhulumente. Zethu ezingundoqo amashishini basemazweni corporate, iimali, imbambano isisombululo, uphuhliso
Nokungabikho abaqondisi-mthetho akukho Joke kwi-Japan